कोरोनासँग सावाधानी अपानाऔं, आत्तिनु पर्दैन
25th September 2020, Friday
० छिमेकी मुलुक भारत, चिन, अमेरिका लगायत सबैतिर कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिँदा नेपालमा भने अहिलेसम्म त्यसको संक्रमण देखिएको छैन भनिएको छ, नेपालको भूअवस्थिति वा के कारणले हो हामी अहिलेसम्म जोगिएको ?
यो कुरा अहिले भन्न असाध्यै गाह्रो छ । नोवेल कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा संसारको अध्ययनबाट पहिले आएका दुइथरी कोरोना भाइरस सार्स र मर्ज मध्ये अहिलेको कारोनाको लक्षण त्यो बेलाको सार्ससंग मिलेको भनेको छ । नेपालमा स्वभाविक रुपमा भित्रिन त भित्रिसकेको छ, कुनै शंका नै छैन ।
० तर सरकारले अहिलेसम्म कसैमा नदेखिएको र देखिएका एक जना पनि निको भइसकेको जनाएको छ नि ?
त्यो अमेरिका पुग्छ भने यहाँ पनि आँउछ । अर्को कुरा चिनियाँहरुको आवत जावत हामीकहा अन्त भन्दा अलि बढ्ता नै छ । त्यसैले यहाँ भित्रीसकेको छ, तर त्यसले रुप देखाईसकेको छैन । गुप्तचरहरुले काम गरेर परिणाम ल्याइसकेका हुन्छन् तर तिनले आफ्नो रुप नदेखाए जस्तै कोरोनाको पनि त्यही हालत छ ।
० त्यसो भए नेपालमा अझ सम्म त्यसको रिर्पोट पोजेटिभ किन नदेखिएको त ?
एउटा कुरा त खाली रुघा खोकी र सामान्य ज्वरो आँउदैमा कोही पनि परिक्षण गर्न आँउदैनन् । किनकी जाडोमा त्यो मौसमी समस्या हो । अचम्म के छ भने यो भाइरसको पहिलेको भन्दा रुप फरक देखियो । पहिलो कुरा यत्ति मामुली ज्वरो आइदिन्छ र त्यहीँबाट निको भएर जाइदिन्छ । दोस्रो कुरा ज्वरो नै नआइकन पनि उ भित्रिन सक्छ । हाम्रो शास्त्रमा व्याख्या गरेको जस्तो देविसंगको लडाइमा महिषासुरुले रुप लिए जस्तै यो भाइरसले रुप लिन सक्छ । कडा हुँदै गाये भने ज्यान खतरामा हुने हो । नत्र अधिकांशलाई केही नदेखिकनै पास हुने हुनेले समान्य ज्वरो खोकी लागेकोमा यसलाई पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । यसो हुँदा यसको फैलावट दर घट्छ । यो भयंकरसंग फैलिन सक्छ तर मान्छे मार्न भने कम सक्छ ।
० त्यसो भए मरीहाल्ने भनेर डर मान्नु पर्दैन ?
पर्दैन । तपाँइलाई लागिहल्यो भने तपाँइ मरिहाल्ने चान्स हुँदैन । कडा हुने पनि एकदमै चान्स कम छ । तर तपाँइले आफैंले त्यसलाई फैलाउनुहुन्छ । यो संसारभरी यसरी छिटो फैलनुको कारण श्वास प्रश्वास र मान्छेहरुको जमघट नै हो । एकबाट तिन, तिनबाट नौ र नौबाट २७ जनाको रेसियोमा यो फैलँदै जान्छ । मृत्यु कुल बिरामीको एक डेढ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यो सामान्य कुरा हो, तर यस्तो गतिका साथ फैलिरहेको छ कि त्यो फैलावट रोक्न सकिएन भने मान्छे मर्ने क्रम पनि स्वत बढ्दै जान्छ ।
० तर नेपालमा सचेत चाँही हुने तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्छन् त ?
नेपालमा देखिएको छैन भन्दैमा चुप लागेर बस्न हुँदैन । सामान्य रुखाखोकी लाग्दैमा परिक्षण गर्न कोहेी आँउदैन । अरुले छिटो मार्थे तर फैलन पाँउदैनथे तर यसले मार्दैन तर फैलिन पाँउछ छिटोछिटो । यसपालीको भाइरस पनि चलाख भएर आएको छ ।
० हाम्रो मुख्य कमजोरी के हो त यसमा ?
हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेकै लोभ लालच हो । संसारभरी फैलिएको यत्ति लामो अवधी भइसक्यो तर हाम्रो अन्तराष्ट्रिय उडान अझै निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ । प्लने ट्राभलकै कारण नै संसारभरी यो छिटो छिटो फैलिएको हो । गर्मि बढेपछि शायद यसको प्रकोप नै कम हुन्छ । नेपालमा अवश्य पसेको छ, तर धेरै फैलिन पाएको छैन । यसले रोगको रुप लिन सकेको छैन ।
साायद चीनको एउटा ८३ वर्षको डक्टर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले अस्तिमात्र एउटा वक्तव्य दिनु भएको छ । उहाँले विगतमा सार्सको बेलामा पनि यो रोगको अवधी यत्ति सम्म भनेर तोक्नु भएको रहेछ । अमेरिकी एक डाक्टरसंग भिडीयो कन्फरेन्स गरेर उहाँले शायद यो गर्मि बढेपछि यो कम हुन्छ भन्नुभाछ । मेरो पनि त्यही धारणा हो । रुखा खोकी लाग्ने अरु भाइरसहरु पनि गर्मी लागेपछि कम हुन्छ, सेम त्यस्तै हो । भित्रिसकेको अस्थामा जाडोमा त नेपालमा त्यत्ती देखिएन भने अब गर्मी लागेपछि मत्थर भएर जाला की भन्ने आशा हो । चीनमा विगतमा अत्यन्तै खराब रुप लिएपनि आजको अवस्थामा चीनले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरिसक्यो । त्यस्तै सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड र हंकङले पनि रोकिसकेका छन् । उनीहरुले रोकथामका उपाय कडाइका साथ गर्न सके । भारतले पनि पुरै मुलुकलाई नै क्वारेन्टइनमा राखेको छ, तर यहाँ चाँही हामीले त्यो गरेनौं ।
० यसको अर्थ हाम्रो सरकारका तर्फबाट सवाधानी अपनाउने सन्दर्भमा कमजोरी छन् ?
अवश्य । हाम्रो सरकारको सबैभन्दा ठुलो गल्ती के छ भने हरेक देशबाट प्लेन हरेक दिनमा हाम्रो देशमा आउन दिइराखेको छ । यतिसम्म की यत्रो संक्रमण हुँदा चाइनीज एयरलाइन्स ३–३ वटा भित्रीराखेको छ । कोरीयाबाट सिधा उडानका फ्लाइट आएका छन् । हाम्रो नेपाल वायुसेवाको विमान उडेर जापान गइराखेको थियो । त्यसैले यहाँ हाम्रो सरकारले भयंकर गल्ती गरिरखेको छ । अमेरीकी एयरलाइन्स भनेको संसारभरीको ठुलो एयरलाइन्स हो । उसको ३ भन्दा बढी वाइडबडी छ । हिजो मात्र उसले ७५ प्रतिशत प्लेन बन्द गरिसक्यो । एक महिनाका लागि ग्राउन्डेड नै गरिदियो । २५ प्रतिशत मात्र प्लेन चलेको छ, त्यो पनि आन्तरिक मात्र । कतारले आफैंले नेपालीहरु जान दिएको छैन । तर हामीले कोरीया–चाइनाबाट आउने प्लेन कहिल्यै रोकेनौं । यो सरकार डलरको पछि लाग्यो । बुझेन की मुर्दाबाट डलर कमाइँदैन । बाँच्यो भने मात्र डलर कमाइन्छ । नेपालमा एकचोटी फैलियो भने त यसले विकराल रुप लिन्छ । हामीले नियन्त्रण गर्न सकिन्न, किनकी यस्तो बाक्लो बस्ति भएको ठाँउमा यसले समस्या ल्याँउछ । फैलियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता हामीसंग छँदैछैन, त्यसैले यसमा पहिल्यै सावधान हुनु, ध्यान पु¥याउनुको विकल्प छैन । चाइनाको छिमेकी र सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने हामीलाई भए पनि यिनीहरुले बेवास्ता गरिदिए ।
० अब के गर्ने त हाम्रो तर्फबाट ?
आएपछि आइहाल्छ । अहिले पनि फैलन नपाएको मात्र हो । फैलिहाल्यो भने हामीसंग परिक्षण गर्ने किट नै छैन । यसको नतिजा तत्काल देखिएको छैन, देखिन थाल्यो भने वा विरामी म¥यो भने एक पछि अर्को बढेको बढ्यै हुन्छ । किनकी हामीकहाँ टोलहरु एकदमै घना छ । मुख्यत हाम्रँे सरकारले चाँहिदो सर्तकर्ता पटक्कै अपनाएन । भोली रोग देखियो र सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन भने सरकारविरुद्ध जनता उर्लिएर सडकमा व्यापक ढंगले आउन सक्ने स्थिति हुन्छ ।
० सरकारले सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा पनि गरेकोे छ नी ?
सेल्फ क्वारेन्टाइन कतिजनाले गर्छ नेपालमा ? मलाई रोग लाग्यो भने मैले कसरी थाहा पाउने ? मेरै एकजना विरामीको लक्षण बुझ्दा कोरोनाको लक्षण होकी भनेर टेकु पठाइदिए, उनीहरुले सोधपुछ गरेर शंका लागेमा मात्र जाच्न पठाउने भने रे । शायद शंका लागेर गइसकेपछि त सबैको जाँच गरिदिनुपर्छ नी । तर यिनीहरुको क्षमता पुग्दैन । ज्वरो नदेखिए पनि भाइसर हुँने रहेछ भन्ने त चाइनाको उदाहरणले देखिसकियो । गनबाट ज्वरो हेरेर मात्र केही थाहा हुँदैन । त्यसको भर प¥यो भने रोग अन्यलाई पनि फैलिन सक्छ । खतरा हामीलाई भयंकर भइसक्यो । सुरुबाटै चाइनाबाट आउने सबै नाका बन्द गर्नुपथ्र्यो ।प्लेन ट्रावल बन्द गर्नुपथ्र्यो । चाइना रिसाउँछ भनेर त्सो गर्न नसक्नु हाम्रो सरकारको लाचारीपन हो ।
० सर्वसाधारणले यो बेला के केमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ?
भीडभाडमा जानुहुन्न । सिनेमाघरहरुमा जानुहुन्न । सरकारले बिहृे कटौती गर, भिडभाड नगर भन्ने । तर लागु नहुने । भोज भतेरहरु नगर्ने, सहभागी नहुने । खुला ठाँउमा भने त्यती डर छैन । रोगी जो छ, अर्थात जसलाई रुखा लागेको छ उसले माक्स लाएर अरुलाई बचाउने मात्र हो । तर माक्स लाँउदैमा आफु बच्छु भन्ने त छैन । रोगीसंग संगत हुँदा मात्र माक्स लाउने हो, सर्व साधारणले खुलमखुला हिँड्दा त्यहाँ ामक्स लाउने काम नै छैन । माक्र्सको अभाव मात्र हुने हो । कृतिम व्यापारलाई बढावा दिने हो । त्यस्तै खोक्दा वा हाच्छीउ गर्दा हातमा नभई रुमालमा वा बाहुलामा गर्नुपर्छ । तर अर्काको मुखको अघिल्तीर गएर ख्वाङ–ख्वाङ नगर्दिनु । ह्यान्डचेक त गर्नै हुँदैन । पुरानो संस्कार नै हो, हामीले नमस्कार नै गर्नुपर्छ । हात राम्रोसंग साबुुन पानीले धुनुपर्छ । सार्जमा र यसमा दुबैमा दिसा,पिसाव, ¥याल, नाकको सिंङ्गान इत्यादीबाट यो रोग फैलन सक्ने देखियो । खाली हाच्छीँउ र खोकीबाट मात्र होइन । तसर्थ त्यहाँ पनि हामीले बचाउ गर्नुपर्छ । घरमा कसैलाई रुखा खोकी लागेको छ भने भाँडाकुँडा पनि अलग गर्ने, खानपिन पनि अलग गर्ने र संभव भए कोठा पनि अलग्गै गर्ने गर्नुपर्छ ।
० यसको औषधी पत्ता लगाउन नसक्ला र ?
अचम्म के देखिएको छ भने एचआइभी एड्समा हुने औषधी यसमा प्रयोग गरेका छन् । चाइनीजहरुले त धेरै अनुसन्धान गरिसके । त्यो पनि कही काम लागेको देखिएको छ । मलेरियामा लाउने पनि परिक्षणको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । रोगलाई नियन्त्रण गर्ने सम्मको औषधी त अलि छिटो आउला । तर भ्याक्सीन आउन अहिले सुने अनुसार १२ देखि १८ महिना लाग्छ ।
० यो रोगीहरुले खानपानमा के ध्यान दिनुपर्छ ?
यसमा केही ध्यान दिनु पर्दैन । सामान्य रुचेको खाने हो । क्लोज सराउन्डीङमा नजाने, जमघट नगर्ने र विरामीहरुबीच नपुग्ने नै मुख्य उपाय हो । शंका लागेको मान्छेसंग ३–४ फुट परै बसीदिनोस् ।
० अलिक फरक प्रसंग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो विरामी अवस्था कसरी हेरीरहनु भएको छ ?
मलाई सबैभन्दा दुख लागेको, चिन्ता लागेको र रिस उठेको उहाँको स्वास्थ्यमा खेलाँची गरेको विषयमा हो । जब प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गरियो नी, त्यो बेला त्यस्तो जटिल प्रत्यारोपण गरेर आएको व्यक्तिलाई साह्रै रिस्क कन्डीसनमा शो गराइयो । आफ्नै शरिर राम्रर िथेगेर हिँड्न सक्ने शक्ति नै त्यती कमजोर भएको बेलामा हेनुस् त मान्छेले घेरेका । त्यस्तो घेरावन्दीमा उहाँले हात उठाउनुभएको छ । त्यस्तो गर्न दिन अवस्य हुँदैनथ्यो । डाक्टरहरुको कत्रो लापरवाही । सल्लाहकार तथा सचिवालयको कस्तो रहर ? त्यो बेला उहाँलाई त बन्द एम्बुलेन्समा राखेर अझ ड्राइवर सम्मलाई पनि शिसाले छेकेर हाइकेयरमा लानुपर्ने । माक्स सम्म खोलिदिएका छन् । यो हदसम्मको बेकुवी गर्नु हुँदैनथ्यो । बालुवाटारमा एकदम हाइ केयरमा राख्ने तयारी गरेपनि त्यती बीचमा उहाँलाई सानो लापरवाहीले गर्दा संक्रमण हुन सक्दैन र ? उहाँलाई त यो कोरोना मात्र हो र मामुली एन्फ्लुएन्जाले पनि अँठ्याउँछ यतिबेला । त्यत्ति जमघटबाट टिवी, निमोनिया जेको पनि संक्रमण फैलिन सक्छ । यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो ।
यस्तो लज्जास्पद हार व्यहोर्दा पनि कांग्रेसले नचेत्ने ?
मन्त्रिपरिषद्को हरेफेरमा मैले कुनै चासो राखेको छैन
उहाँ जनताबाट पुरै तिरस्कृत, कामै नलाग्ने व्यक्तित्व होइन
चोकमा हुने टिप्पणी सुनेर धारणा बनाउनु गलत हो
कमीकमजोरी मात्रै भएका हुन् कि पदबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था हो
हाम्रो टाउका गनेर पार्टी विभाजन हुन दिन्नौं
केपी कमरेडलाई सिंहाशनमा राखेर बेइज्जत गरिएको छ
पार्टीको निर्णय गर्यो भने ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ
गुट चलाउने कुराले कसैले हित गर्दैन
मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको छ भने किन यत्रो रोइलो ?
देशलाई केक बनाएर काट्ने कुरा कसरी पचाउनु ?
घोषणापत्र अनुसार सरकारले गति लिन नसकेकै हो
चोरबाटोबाट पदवी लिने को–को ?
काठमाडौं । अन्य राष्ट्रसेवक तथा समाजमा विभिन्न योगदान पु¥याएका व्यक्ति झै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूलाई सरकारले संविधान दिवसका दिन विभिन्न मानपदवी तथा विभूषणहरू प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसका लागि संगठनबाट विभिन्न योगदान हेरेर संगठन प्रमुखले सिफारिस गर्ने प्रचलन छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको...
किन लाग्यो यो पुस्तकमाथि रोक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेर वितरण गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ को थप छपाइ तथा वितरण कार्य रोकिन पुगेको छ । केही प्रति छापिएर वितरण भइसकेपछि कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार आउने भन्दै अरू प्रतिको छपाइ र वितरण कार्य रोकिन पुगेको हो ।...
अभियुक्त छुटाउन यस्तो सौदाबाजी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पत्नी हत्या पुष्टि भई सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाई जेलमुक्त गरिदिएपछि न्यायालयप्रतिको जनआस्था गिर्दै गएको विषय पुनः तरंगित हुन पुग्यो । तर, सरकारले त्यसमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएर अदालती प्रक्रियासमेत अघि बढेकाले यसबारे त्यति धेरै टिप्पणी गर्नु असान्दर्भिक होला । ८...
मेगा बैंकको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले १८ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्न गोप्य शिलबन्दी आह्वान गरेको छ । मेगा बैंकले संस्थापक समूहतर्फको ११ लाख ३३ हजार ३ सय ४४ दशमलव ७० कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको ७ लाख ७ हजार ३ सय ९४ दशमलव ९३ कित्ता गरी १८ लाख ४०...
साहित्य–सन्ध्याले नेपाली साहित्य–इतिहासमा लामो अवधि छिचोलेको छ । प्रगतिशील साहित्य–संस्कृतिक आन्दोलनलाई गति दिन प्रारम्भ भएको यो आन्दोलनले करिब चार दशक अवधिमा पाइला टेक्न लाग्दैछ । सोही संस्थाका अध्यक्ष राम विनयले पछिल्लो समय बेग्लै अनुभव सँगाले । त्यो अनुभव थियो– भर्चुअल गोष्ठी । बितेको ६ महिना अर्थात् कोभिड–१९ को महामारीले नेपाली...
पाँच दशकको नालीबेली
जुनसुकै क्षेत्रमा स्थापित मानिस किन नहुन्, हरेकले जीवन–यात्राका क्रममा आ–आफ्ना पृथक अनुभव र अनुभूतिहरू साँचेका हुन्छन् । कतिपयले आफ्ना अनुभव अरुलाई बाँड्न रुचि देखाउँछन् भने कतिपय अनिच्छुक हुन्छन् । इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेका र सोही क्षेत्रमा भिजेका गणेशराज वस्तीले भने जीवनका तीता–मीठा यादहरूलाई ‘संघर्ष’ नामक पुस्तकमा समेटेका छन् । उनले...
एनआईसी एशियाको चेक जम्मा अनलाईनबाटै
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले देशको बैंकिङ्ग इतिहासमै पहिलो पटक ग्राहकले घर वा अफिसबाट आफ्नो मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटर प्रयोग गरी यस बैंकको चेक आफ्नो वा आफुले चाहेको खातामा जम्मा गर्न अनलाईनबाटै भौचर भर्न मिल्ने प्रणाली शुरु गरेको छ । ग्राहकले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत जततउकस्ररधधध।ष्कभचखभ।लष्अबकष्बदबलप।अयm लिंकमा गई चेक जम्मा...
पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभावको सर्वेक्षण
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सेयरकास्ट इनिसएिटिभक नेपालको सहकार्यमा महासंघले गरेको सर्वेक्षणको नतिजा भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोभिड–१९ महामारीको समयमा पत्रकारको पेसागत समस्या तथा सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेको अवस्थाको...
नेपाल बैंक र लिसंखु पाखर गाउँपालिकाबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित लिसंखु पाखर गाउँपालिकाबीच उक्त गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालन गर्न लागेको अध्यक्ष उद्यमशिलता विकास कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ । गाउँपालिकाले संचालन गर्न लागेको ‘अध्यक्ष उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम’ले गाउँपालिकावासीलाई व्यावसायिक कृषि, तथा पशुपन्छीमा आधारित...